९ माघ, पोखरा । मोफसलको प्रतिष्ठित आहा ! रारा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिता आजदेखी पोखरामा शुरु हुँदैछ ।
सहारा क्लव पोखराको आयोजनामा पोखरा रंगशालामा माघ २० गतेसम्म हुने १६ आैं संस्करणको आहा ! रारा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिता आजदेखि शुरु हुन लागेको हो ।
प्रतियोगिताको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले उदघाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजक सहारा क्लवका अध्यक्ष केशबबहादुर थापाले जानकारी दिए । उदघाटन कार्यक्रम दिउँसो १ः३० बजेदेखि हुने र कार्यक्रम समापन भएलगत्तै खेल शुरु हुने उनले बताए ।
प्रतियोगिताको उदघाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लव पोखरा र सुदूरपश्चिम स्पोर्टिङ क्लव धनगढी भिड्दैछन् । आयोजक सहारा क्लवले सोमबार साँझ खेल तालिका सार्वजनिक गर्दै उद्घाटन खेलमा सहारा र सुदूरपश्चिम प्रतिष्पर्धामा उत्रिने जनाएको हो ।
संकटा भने ए डिभिजन क्लवमा जुर्मुराउँदै गरेको टिम हो । यसअघि कमजोर बन्दै गएको संकटा पछिल्लो क्रममा भने सुधारिएको छ ।
यसैबीच, क्लबले वर्क परमिट लिएका विदेशी खेलाडीलाई मात्रै प्रतियोगितामा खेल्न दिइने भएको छ । आयोजक सहारा क्लवले क्लोज क्याम्पमा राखेर प्रशिक्षण गराएका विदेशी खेलाडीलाई वर्क परमिट नभएकै कारण नखेलाउने निर्णय गर्दै फिर्ता गरेको छ । संकटामा पनि विदेशी खेलाडी रहेको र उनीहरुको वर्क परमिट नभए खेल्न नपाउने बताइएको छ ।
प्रतियोगितामा ३ विभागिय टिमसहित १२ टिमले प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । प्रतियोगितामा विभागीय टिमसहित ३ वटा ए डिभिजन क्लव, ३ मोफसल, २ विदेशी र आयोजक एकसहित १२ टिमले प्रतिष्पर्धा गर्ने क्लवले जनाएको छ ।
‘खेलकुदको विकासमा सहकार्य गरौं, पोखरालाई खेलकुद पर्यटन शहरको रुपमा स्थापित गरौं’ भन्ने नारासहित हुन लागेको प्रतियोगितामा विभागीय टिमहरु नेपाल पुलिस क्लब, नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब, सशस्त्र प्रहरी वलको एपिएफ क्लब, ए डिभिजन क्लबहरु मनाङ मस्र्याङ्दी, थ्रिस्टार, संकटा क्लब, मोफसलका रमपम झापा ११ फुटवल क्लब, धरान फुटवल क्लब, सुदूरपश्चिम ११ स्पोर्टिङ क्लब धनगढी, विदेशी टिम उत्तर बरिन्धरा क्लब बंगलादेश, युनाइटेड सिक्किम फुटवल क्लब भारत र आयोजक सहारा क्लवले प्रतिष्पर्धा गर्ने आयोजक सहारा क्लबका अध्यक्ष केशबबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई हिरो ड्यास स्कुटर तथा बेष्ट अफ फाइभ विधातर्फ उत्कृष्ट हुने खेलाडीलाई जनही १५ हजारसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने क्लबका अध्यक्ष थापाले बताए । प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्तालाई भने नगद २५ हजारसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र दिइने छ ।अनलाईनखबर बाट